Zavamaniry Aquarium | Ny trondro
ny zavamaniry aquarium Izy ireo dia singa iray hafa amin'ny haingon-trano izay tsy maintsy raisintsika. Indrindra raha te hametraka azy ireo ao anaty aquarium misy antsika isika, satria tsy maintsy fantarintsika ny antsipiriany izay tsy voamariky ny olona indraindray ary mety hanasarotra ny fiorenan'ny aquarium misy antsika.
Ary izany tokoa zavamaniry aquarium mety ho mpiray dina na fahavaloAmin'ny tranga sasany dia tsy maintsy manaraka ny fizotran'ny fampifanarahana amin'ny aquarium antsika isika mba tsy handotoantsika ny rano ka hanome antsika olana.
Ao amin'ity habakabaka ity no hahitanao, karazan-javamaniry, torohevitra momba ny fampidirana azy ireo ao amin'ny aquarium anay ary antsipiriany tsy misy farany hahitana azy ireo ao an-tranonay ary hahatsapantsika fa mahazo aina ao anaty aquarium azy ireo. Zava-dehibe ny fiheverana ny antsipiriany rehetra hikarakarana ny bibintsika.
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia nijery algala mena tamin'ny halaliny isika. Androany izahay mitondra lahatsoratra hafa mifandraika amin'izany. Raha izany dia…
Androany isika dia hiresaka momba ny zavamaniry iray be mpampiasa amin'ny aquariums. Io no moss Java. Ny anaranao…
Ho an'ny haingon-trano sy ny fananganana toeram-ponenana ho an'ny trondro dia afaka mampiasa zavamaniry artifisialy sy voajanahary isika. Nataon'i…
Substrate ho an'ny zavamaniry aquarium
Ny zavamaniry anaty rano dia tsy zavatra haingon-trano fotsiny. Olona velona izy ireo ary noho izany dia mitaky ...
Zavamaniry mitsingevana ho an'ny aquarium
Ny zavamaniry mitsingevana, ankoatry ny haingon-trano ao anaty akarium, dia afaka manome sakafo ho an'ny karazana trondro sasany ...
Zavamaniry anaty rano ao amin'ny Aquarium anay
Ao amin'ny aquarium maro hitako tamin'ny fiainako, ireo zavamaniry anaty rano izay miaina ao anatiny, dia ...